Vaovao - Mampahafantatra ny andiany vaovao an'ny Intra-Oral Sensors
Mampahafantatra ny taranaka vaovao an'ny Intra-Oral Sensors
Ny sensor intra am-bava dia mitovy amin'ny isaky ny toeram-pitsaboana?
Hatramin'izao, nieritreritra izahay fa ny sensor intra oral dia fitaovana nify fototra fotsiny izay ahafahantsika mandinika akaiky kokoa ny ferin'ny marary.
Na izany aza, rehefa nitombo ny isan'ny sy ny fifaninanana eo amin'ireo mpitsabo nify dia nieritreritra tampoka ny “hiverina amin'ny fototra” izahay.
“Tsy maintsy miverina amin'ny maha-zava-dehibe ny fototra isika. Ny sensor intra am-bava dia kely sy fototra saingy zava-dehibe amin'ny famaritana. Tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny kalitaon'ny fototra isika mba hahatafavoaka antsika amin'ity fifaninanana ity. ”
Tena afa-po amin'ny sensor-nao ve ianao?
Inona no olana lehibe indrindra amin'ny fampiasana sensor intraoral?
Marary maro no mahatsapa tena tsy mahazo aina rehefa misy sensor mafy sy henjana manelingelina ny siligaoniny sy ny vavany. Amin'ny tranga henjana dia marary ny marary sasany.
Ity olana ity dia efa ampahany "voajanahary" tao amin'ny tobim-pitsaboana nify, saingy mila manatsara ny "voajanahary" isika.
Ny endri-javatra manan-danja dia manome ny Fiononana tsara indrindra.
Ny endrika ara-dalàna an'ny arofantsika dia tsy efamira fa boribory. Ho an'ny faritra ampidirana volo dia mety tsy hitovy amin'ny olona iray ny fironana amin'ny nify, ary ny sary hitantsika dia fisaka raha ny andohalambon'ny olona kosa dia refy telo.
Izany no mahatonga ny fahazoana sary am-bava mazava tsara miaraka amina sensor henjana sy fisaka mety ho sarotra.
Hitanay tamin'ny valiny ilay valiny.
Teny an-dàlana mankany amin'ny fampiononana ny marary dia nanomboka ny fanavaozana mifantoka amin'ny fampiononana. Ary hitanay ihany tamin'ny farany fa ny fanavaozana rehetra dia avy amin'ny traikefa. Ao amin'ny dinganay hanampiana ny fampiononana ny marary, dia fantatray fa ny traikefa dia manampy amin'ny fanavaozana.
Amin'ny fanaovana azy malefaka, hoentinay hampiharina amin'ny fanazaran-tenao ity fanavaozana ity mba hahazoanao fampiononana tsara indrindra.
Ankehitriny, nanomboka ny Generation of Soft Sensors. Ny fanovana amin'ny antsipiriany dia hitondra tombony be dia be ho anao.
Ampitony ny fanahianao ary mifantoha amin'ny fanazaran-tena ataonao!
Te ho afaka amin'ny lesoka?
Ianao sy ny mpiasao dia handany fotoana sarobidy amin'ny marary rehefa mitranga ireo lesoka ireo, ary hiteraka fanelingelenana amin'ny diagnostikao.
Ny fametrahana optimised no lakilena lehibe indrindra amin'ny fahazoana sary
Ny EzSensor Soft dia miorina amin'ny andohalambo.
Ny sensor mahazatra henjana dia sarotra apetraka mankany amin'ny faritra mialoha sy lava, fa amin'ny EzSensor Soft kosa dia azonao atao tsara ny mametraka ny endriny boribory sy
Fitaovana silicone mba hifanaraka amin'ny fomba anatomika mandritra ny fampiasana.
Rehefa mifikitra amin'ny andohalambo boribory marary izy, ny endrika miolikolika ergonomika dia manakana ny sensor tsy hilentika ao am-bava. Izany dia tsy manampy ny marary hahatsapa fanaintainana kely fotsiny.
Ny sisiny malefaka dia mampiseho ny faritra miafina
Ny sisin'ny malefaka EzSensor Soft dia mamela ny mpiasao hametraka ny sensor mora kokoa noho ny taloha ary ny fampifanarahana amin'ny loharano X-ray dia azo ovaina mifanaraka amin'izay.
Izany dia mampihena ny fifandimbiasana eo anelanelan'ny nify tsirairay, ary vokatr'izany dia azonao atao ny manamarina ny faritra miafina amin'ny sary.
EzSensor Soft mamela anao sy ny ekipanao hanao diagnostika mazava tsara.
Ny fikasihan-tanana malefaka dia manome antoka ny fampiononana farany an'ny marary
Mahatsiaro mafana miaraka amin'ny silika Biocompatible
Ny sensor dia noforonina tamin'ny endrika ivelany malefaka sy vatan'ny Uni miaraka amin'ny tariby.
Ny famolavolana EzSensor Soft miorina amin'ny marary dia mety ho an'ny arches kely aza.
Boribory ergonomika sy voapaika
Ny mpitsabo rehetra dia manana marary mora tohina. Toy ny…
Ny mandibular torus (pl. Mandibular tori) dia fitomboan'ny bible amin'ny mandible manamorona ny faritra akaiky ny lela. Mandibular tori dia matetika eo akaikin'ny premarars ary eo ambonin'ny toerana misy ny hozatra mylohyoid amin'ny moka.
Manokana indrindra, ny marary sasany dia afaka mandalo fanaintainana mafy sy gagging noho ny tori mahasosotra azy ireo.
Ny dokotera dia tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny toerany. Ny EzSensor Soft dia mety ho safidy tsara indrindra amin'ireo karazana marary ireo noho ny fahalemeny.
Ankoatr'izay, ny mari-pamantarana cone 'EzSoft' dia natao mba hampitomboana ny fampiononana ny marary sy ny toeran'ny sensor.
Ny claw malefaka kokoa dia mamela anao hanitsy tsara ny fihenjanana ary ny sakana manaikitra sy ny sandry dia miantoka ny maha-marina ny toerany amin'ny alàlan'ny fihazonana ny zoro voalohany (90 ') manohitra ny herin'ny masticatory.
Miaina ny hatsaran'ny sary
Ny rangotra emulsion sy ny fahatarana fizahana takelaka dia misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fihenan'ny pixel sy ny fahaizany mamantatra caries occlusal.
Ny kalitaon'ny sary avo lenta an'ny EzSensor Soft dia azo antoka amin'ny alàlan'ny famaritana avo lenta sy ny vahaolana teorika momba ny 33.7lp / mm mifandraika amin'ny haben'ny piksely 14.8μm. Miaraka amin'ny tabataba sy ny famoretana ny artifact, EzSensor Soft dia manome ny sary mazava sy tsy miovaova azo atao.
Pixel Size 30 μm (Avo) 60 μm (ambany) 23 μm (Avo) 30 μm (ambany) 14.8 μm
Faharetan'ny kilasy ambony - mahazaka Drop
EzSensor Soft no sensor maharitra mateza indrindra misy. Matetika, rehefa sendra nidina na nanitsaka ny sensor iray dia resin'ny fahasimbana.
Ny ivelany ivelany toy ny fingotra EzSensoft dia afaka misoroka izany! Izy io dia mahazaka fiatraikany ivelany toy ny milatsaka ary mampihena ny loza ateraky ny fahasimbana.
Azonao atao ny mitazona ny EzSensor Soft ho madio araka izay azo atao amin'ny fanamorana.
Faharetan'ny kilasy ambony - fanoherana ny manaikitra
Ny sary etsy ambony dia fanandramana manaikitra natao tamin'ny dingana fampandrosoana ny vokatra. Amin'ity fitsapana ity dia nampiditra hery 50N nandritra ny 100 heny tamin'ny sensor teo amin'ny lalana ambony sy ambany izahay. Ity fitsapana ity dia fanandramana fanandramana ny hetsika masticatory nify.
Vokatry ny fanandramana dia natsangana fa ny EzSensor Soft dia tsy simba, na dia 50 N (eo amin'ny 5 kgf) aza, izay lehibe kokoa noho ny hery masticatory, dia
apetaka amin'ny sensor.
Faharetan'ny kilasy ambony - miondrika amin'ny tariby
Satria matetika ny cable an'ny sensor dia manelingelina ny fakana sary molar intra am-bava, misy mpampiasa maro izay mampiasa ny tariby amin'ny lalana manokana. Mba handaminana an'ity olana ity dia nanao fitsapana hiondrika tariby toy ny miondrika ambony, ambany, havia, havanana amin'ny dingana fampandrosoana izahay. Manokana, ny fanamaivanana ny fakan'ny sensor (ny fifandraisana misy eo amin'ny tariby sy ny maodelin'ny sensor) dia natao haharitra ampy.
Haavo avo indrindra amin'ny fiarovana amin'ny fidirana anaty rano, solika, fiarovana amin'ny rano
Fiarovana Ingress Digit voalohany: Fiarovana amin'ny solids Digit faharoa: Fiarovana ny rano
EzSensor Soft dia nanome isa IP68, izay manasokajy ny sensor mba hiarovana tanteraka amin'ny fifandraisana amin'ny vovoka sy ny fanitrihana mandritra ny fotoana maharitra ao anaty tsindry. Miaraka amin'ity haavo fiarovana ity, ny sensor dia azo alemana ao anaty sterilant ho an'ny fanafoanana ireo zavamiaina bitika toy ny Streptococcus Mutans sy Mycobacterium Tuberculosis.
Ny fametrahana tsara indrindra dia manome anao fahombiazan'ny fotoana
Fahasamihafana amin'ny vanim-potoana: Sensor intraoral VS. Sarimihetsika & IPS
Amin'ny ankapobeny, maharitra 16 minitra (960 seg.) Vao afaka mijery iray
sary sarimihetsika. Ho an'ny IPS, 167 seg ny ambony indrindra. ilaina amin'ny fikirakirana sy fizahana (fanodinana scanner) alohan'ny fizahana farany
ny sary radiôgrafia. Na izany aza, ny sensor intra am-bava Intra dia tsy mitaky afa-tsy dingana telo - fametrahana, fametrahana ary fampisehoana - hanaraha-maso ny sary ary ireo dingana 3 ireo dia manodidina ny 20 segondra ny fitambarany. Ny dokotera dia afaka manangona fotoana bebe kokoa amin'ny EzSensor Soft, satria manome mora kokoa ny fametrahana toerana voatsabo.
Iza no tsy maniry toeram-pitsaboana madio sy maoderina ary malalaka?
Ireo mpampiasa sarimihetsika dia mila manana toerana ara-batana fitehirizana horonantsary sy efitrano maizimaizina hanodinana simika sary X-ray. Na izany aza, raha ny momba ny sensor intraoral dia mila toerana kely ho an'ny PC fotsiny ny dokotera ary hanara-maso hizaha ireo sary.
Ny mpitsabo dia afaka manova ny efitrano maizina sy mametraka ny efitrano fitahirizany ho an'ny marary
efitrano fiandrasana na toerana fandraisana olona.